Netflix တွင် Marvel ၏ SHIELD ၏ရာသီဥတု ၅ ကြိမ်လွှတ်ပေးသည့်နေ့ - တီဗီ
Netflix အပေါ် SHIELD ရာသီ5လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ
နယူးယောက်၊ နယူးယောက် - အောက်တိုဘာ ၇ ရက်။ (L-R) Jeph Loeb, Clark Gregg, Chloe Bennet, Ming-Na Wen, Iain De Caestecker၊ 2017 နယူးယောက်ရုပ်ပြ Con အတွင်း 2017 - အောက်တိုဘာလ 7, 2017 နယူးယောက်စီးတီးရှိနေ့။ (Dia Dipasupil / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Riverdale spin-off Sabrina သည်နှစ်ရာသီအမိန့်ဖြင့် Netflix သို့ရွေ့သွားသည် ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာတွင် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသစ် ၂၅ ကား
SHIELD ရာသီ ၅ ၏အံ့’s ခြင်း၏အေးဂျင့်များအား Netflix သို့မည်သည့်အချိန်တွင်ပေါင်းထည့်ရမည်နည်း။ ပရိသတ်များသည် ၂၀၁၈ နွေရာသီတွင် Netflix တွင်ပဉ္စမရာသီအပြည့်အစုံကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Season5ကိုဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်သောကြာနေ့ ABC မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ပရိသတ် ၅ ယောက်ဟာ Netflix ပေါ်မှာစီးရီးကိုသာကြည့်ကြတာကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာရာသီသစ်ကို Netflix သို့မည်သည့်အချိန်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းမည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည့်ဝဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေနေကြသည်။
Netflix ပေါ်ရှိယခင်ထုတ်ဝေမှုများအပေါ် အခြေခံ၍၊ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ5ကို ၂၀၁၈ နွေရာသီအစောပိုင်းတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင် Netflix တွင်ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဘာလို့ဖြန့်ချီမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်ကိုမျှဝေလိုပါသည်။
update: SHIELD ရာသီ5၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ, ဇွန်လ 17, တနင်္ဂနွေ Netflix ကို hits ။
ရာသီသစ်များ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီကုန်ဆုံးချိန် ABC ရုပ်သံပြီးနောက်ရက် ၃၀ အကြာ Netflix သို့ရောက်ရှိသည်။ Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ, အရှုပ်တော်ပုံ နှင့် လူသတ်မှုကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်နည်း Netflix တွင်လည်းအလားတူဖြန့်ချိမည့်အချိန်ဇယားကိုလိုက်နာပါ။ ABC နှင့် Netflix အကြားတစ်ခုခုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါက၊ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ ၅ သည် Netflix တွင်ရာသီကုန်ဆုံးပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ တွင်လည်းရောက်ရှိသည်။ ABC ကသူတို့ရဲ့ရာသီနောက်ဆုံးရက်စွဲကိုနှစ်လယ်ပိုင်းရာသီပြီးတဲ့အခါကြေညာဖို့စောင့်ဆိုင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဘို့အအတိအကျဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲမသိရပါဘူး SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ5ဒါပေမယ့်ငါတို့တစ်လျောက်ပတ်သောစိတ်ကူးရှိသည်။
အတိတ်ကာလသစ်ရာသီ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် စက်တင်ဘာလတွင် ABC တွင်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် ABC သည်စီးရီး၏ပဉ္စမရာသီကိုဒီဇင်ဘာလတွင်ပြသခဲ့သည်။ ရာသီသည်အခြားရာသီများကဲ့သို့ဖြစ်စဉ် ၂၂ ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်ရာသီသစ်မည်သည့်အချိန်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်မည်နည်း။
လမ်းကြောင်း - Netflix သို့လာမယ့်အံ့ဖွယ်ရုပ်ရှင်တွေ
ABC ရုပ်သံရဲ့သမိုင်း, အပေါ်အခြေခံပြီး SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ ၅ ပွဲအပြီးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇွန်လတွင် ABC ရုပ်သံလွှင့်တင်မည် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ ၅ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလတွင်ဇွန်လတွင်ရာသီသစ်များစီးဝင်သောရာသီသစ်များရောက်ရှိခြင်းကြောင့်နှောင့်နှေးခြင်းသည်တစ်လထက်မပိုစေရ။
နောက်လတွင် ABC သည်ပဉ္စမရာသီတွင်စီးရီး၏ဇာတ်လမ်းတွဲများကိုထုတ်လွှင့်ရန်စီစဉ်ထားပုံကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသင့်သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်ဖြစ်စဉ်များကိုနှစ်ဆတိုးခြင်းဖြင့် ABC သည်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ5ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမတိုင်မီအထိထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အေဘီစီမှယခုနှစ်ပထမနှစ်အပြီးတွင်ထိုသို့စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
ယခုအချိန်တွင် Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သောအံ့ shows ဖွယ်ရာအံ့ vel ဖွယ်ရာပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုပါ Daredevil, ဂျက်စီကာဂျုံးစ်, လုကာကေ့, သံလက်သီး, The Defenders, The Punisher နှင့်ပိုပြီး!
Jurassic ကမ္ဘာကြီး Netflix အပေါ်နိုင်ငံတော်သို့လဲသော
tvd ရာသီ7သည် netflix ပေါ်ထွက်လာသောအခါ
အဘယ်ကြောင့် Netflix အပေါ် Big Bang သီအိုရီမဟုတ်ပါဘူး